शनिबार टुँडिखेलमा घोडेजात्रा मनाइँदै - Everest Dainik - News from Nepal
शनिबार टुँडिखेलमा घोडेजात्रा मनाइँदै
काठमाडौँ । चैत ३ गते शनिबार चैत कृष्ण औंशीका दिन टुँडिखेलमा अश्वकला प्रदर्शन गरेर घोडेजात्रा पर्व मनाइँदै छ ।
टुन्ड नामक राक्षसले सहरका बालबालिकालाई दुःख दिएपछि तिनै राक्षसलाई घोडाको टापद्वारा कुल्चाएर राख्ने उद्देश्यका साथ टुँडिखेलमा घोडा दौडाएर यो पर्व मनाइने गरिन्छ । घोडेजात्राका दिनदेखि सागसब्जी, हरियो लसुनलगायतका तरकारी बेस्वादको हुँदै जाने मान्यता छ । पाटनमा एउटा आँखा नदेख्ने घोडालाई हाहाहुहु गर्र्दै बालकुमारीटोलबाट सहरमा धपाएर यो जात्रा मनाउने प्रचलन छ ।
जनैपूर्णिमाका ब्राह्मण, तीजका महिला, असारका रोपाहार र घोडेजात्रा मनाइरहेका नेवार समुदायसँग यस दिन जिस्कने फुर्सद हुँदैन भनिन्छ । घोडेजात्रा मनाइरहेका नेवार समुदायलाई कता हौ ? भनी ठट्टा गर्दा म जङ्गबहादुर राणाको घोडा किन्न हिँडेको हुँ भनी धक फुकाएर एक जमानामा भन्ने गरिन्थ्यो भन्ने जनश्रुति छ । कसैले नतिर्ने नियतले सापटी लिँदा घोडेजात्राको भोलिपल्ट तिरौँला भनेर टार्ने गर्छन् भनिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस टुँडिखेल बचाउन मेयर शाक्यलाई चिठ्ठी
पाटनको घोडालाई ‘ए कानु ए कानु भन्दै हाहा र हुहु’ गर्दै घाँस नभएको ठाउँमा दौडाउने गरिन्थ्यो तर अचेल सडक बाटोतिरै घोडा दौडाउने गरिन्छ । धादिङ छत्रेदेउराली गाउँपालिका वडा नं. २ का शिवहरि लुइँटेलका अनुसार धादिङको गल्छीमा २०७२ सालसम्म घोडेजात्रा मनाउने गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले त्रिशूलीमा घोडासहित फाल हालेको संस्मरणमा यो जात्रा त्यहाँ हुने गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर टुँडिखेलको अस्तित्व जोगाउनुपर्छः अध्यक्ष थापा
उनका अनुसार थानकोटको झ्यालटुङ्पाटीमा पनि पोखरीमा कानु घोडा कुँदाएर यो जात्रा गत २०६८ सालसम्म मनाइने गरिएकोमा यो जात्रा अचेल हुन छाडेको छ । उपत्यकाका तलेजु भवानीका बाहनका रूपमा राखिएका घोडालाई भने जात्रा लाग्दैन । हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका मिठाराम पुडासैनीका अनुसार यी घोडा देवता स्वरूपका भएकाले जात्रा लाग्दैन । यसै दिन टुँडिखेलको चार कुनामा रहेका राणा प्रधानमन्त्री घोडा सवार भएको सालिक अवलोकनसमेत गरिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस आजदेखि टुँडिखेलमा पार्किङ गर्न नपाइने
यसैदिन सिंहदरबार पश्चिमद्वारतर्फ फर्किएको भद्रकालीमा रहेको मोहनशमशेरको सालिकलाई माल्यार्पणसमेत गर्ने गरिन्छ । घोडेजात्राका दिन जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालय अगाडि रहेको अश्विनीकुमारको पीठमा रिसल्लासहित आएको नेपाली सेनाको क्याभलरि युनिटले एकाबिहानै बोका बलि दिएपछि टुँडिखेलमा घोडेजात्रा सुरु हुन्छ ।
ट्याग्स: घोडेजात्रा, टुँडिखेल